KDE Unganidzo ikozvino inogona kutumira sms kubva kune chero desktop | Linux Vakapindwa muropa
KDE Unganidzo ndechimwe chezvirongwa zvinozivikanwa kwazvo muKDE chirongwa, kwete chete kwekushanda kwayo asi nekuti nekuda kweapplet, chirongwa ichi chinogona kusvika pamatafura makuru muGnu / Linux nyika, pasina kuisa KDE Plasma.
Iyi applet inoshanda zvizere uye inotibvumidza isu kugamuchira uye kudzora zviziviso izvo yedu smartphone inogamuchira kubva kukomputa yedu. Asi ikozvino iyi applet inoenda nhanho imwe kumberi. Zvino, vashandisi veapplet ino vanozokwanisa kutumira sms kubva kucomputer, Pasina kudiwa kwe chero chirongwa chekunze kana sevhisi.
Iyo KDE Unganidzo applet ndiko kuwedzera kukuru uye mashandiro ayo anotendera iwe kuti chero desktop yakaita seBudgie Desktop kana Ubuntu Unity inogona kushanda zvakanaka nharembozha yedu uye ne KDE Unganidzo.
Iyo KDE Unganidzo applet ndeye yakakwana yekuwedzera yematafura kunze kweKDE Plasma.
Kugadziriswa kwazvino kweiyi KDE Unganidza Applet yemamwe madhesiki kunotibvumidza kutumira SMS kubva kumacomputer edu sekunge kwaibva ku smartphone, ndokuti, kutumira SMS tisina nharembozha yedu uye kuoneka nhamba yedu semutumiri weshoko.
Iri basa nyowani raigona kutoitwa kubva kuiyo KDE Unganidzo kunyorera yePlasma pachayo, asi ichokwadi kuti kubva kune mamwe madhesiki, izvi zvaisagona kuitwa. Munyika umo maficha akadai seWhatsApp kana Teregiramu anotonga nhaurirano dzevashandisi venhare, zvinoita sekunge zvine musoro kugona kutumira sms kubva pacomputer.
Chero zvazvingaitika, mushure mekuvandudza iko kunyorera, mushandisi anozoda iine iyo smartphone yakabatana kune imwecheteyo Wi-Fi network sekombutaZvikasadaro, kana iwo meseji haashande kana mamwe emabasa ayo ese ari maviri applet uye neyazvino application inofanirwa kuvandudza kushandiswa kwefoni mbozha nekombuta hazvishande.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » KDE Unganidzo ikozvino inogona kutumira sms kubva kune chero desktop
Handina kufunga kuti zvine musoro. SMS ichiri kushandiswa uye kugona kuvapindura kubva pakombuta ndizvo zvakashaikwa neKDEConnect.
Gabriel Ochoa akadaro
Sezviri pachena chinhu chinotonhorera nezvazvo ndechekuti KDE Unganidzo chikuva chekutaurirana pakati pematafura. Iyo inogadzirisa kubatana pakati peizvi nekuzvibatanidza otomatiki uye ndinofungidzira kuti ichawedzera chikamu chekuchengetedza nekunyorera iko kubatana. Nezve izvi tinogona kuzvibvisa patinogadzira maapplication eaya ruzivo, tichikwanisa kugadzira ma module atinogona kufunga nezvazvo kuti vashande pamwe chete.
Zvandisingakwanise kutaura kana pairing yakaitwa pakati pematafura zvisinei nekuti mukana wekubatana pakati pavo, semuenzaniso kana uchishanda kuburikidza neBluetooth.
Pindura kuna Gabriel Ochoa
Kde kubatanidza kunoshamisa, kwandiri…. Zvakanaka kutumira mafaera kubva kunhare mbozha kuenda kuCpu uye zvinopesana…. Zvinenge zvakafanira kuti vazviite pc ne pc… .. chingave chakanyanya ..
Ndinoda kuziva zvandiri kutadza kuitira kuti mafaera andinotumira ne KDE Unganidzo kubva kuApple nhare, anotambirwa zvakanaka pane yangu Linux laptop uye kubva ipapo kuenda kune nhare
inondiudza kuti yaisatambirwa.
Handina kuita chinhu nemazvo, uye tarisa kuti zviri nyore sei.
Microsoft inoenderera kubhadharisa patent yekurwisa Linux